Fernandinho Oo Badbaadiyey Manchester City
HomeWararka MaantaFernandinho Oo Badbaadiyey Manchester City
Ciyaaryahanka Fernandinho ayaa kooxdiisa Manchester City ka badbaadiyey in lugaha lagu dhago oo turaan-turro kale ay kala kulanto kooxda inay daadegto qarka u saaran ee Aston Villa oo ku guuleysatay inay ka soo kabato laba gool oo lagaga horeeyey ciyaar ay marti ugu ahayd garoonka Etihad Stadium ee magaalada Manchester Sabtidii.
Kulan aan waxba la isula hadhin, iyo bandhig rajo raadin ah oo ay Villa gashay ayaa suurto gal ka dhigtay in Carlos Sanchez goolkii barbar dhaca 2-2 u soo celiyo kooxda Aston Villa wakhti ay ciyaarta ka dhinayd shan daqiiqo oo kaliya, laakiin xidiga reer Brazil ayaa ka faa’iideeyey wakhtigii koobnaa kaas oo 89 aad markii la marayo kubad qurux badan oo uu xabadka ku dejiyey ku shubay shabaqa.
Manchester City ayaa bilowgii ciyaartan daqiiqadii 3 aad hogaanka ku qabatay gool uu u dhaliyey weeraryahan Sergio Aguero, waxaanay gool labaad keentay qaybtii dambe kaas oo uu magaciisa ku saxeexay , Aleksandar Kolarov.
Laakiin 2 daqiiqo kadib, Aston Villa laacibkeeda, Tom Cleverley ayaa gool ka soo baday, waxaana goolkii labaad ee bareejuhu yimid daqiiqadii 85 aad kaas oo uu waranka kaga gooyey Villa, Carlos Sanchez.
Balse goolka yimid dhamaadkii ciyaarta ee guusha u horseeday City , ayaa keenay inuu madaxa ka ruxo tababare Tim Sherwood oo arkay inaan kooxdiisa rajjo kale u hadhin.
City ayaa kaalinta 2 aad si ku meel gaadh ah u fadhida, kuna sii simaysa Arsenal oo laba kulan baaqi u yihiin iyo United oo ciyaari u hadhay.
Halka Aston Villa ay laba dhibcood oo kaliya ka sarayso kooxda Sunderland oo kaalinta koobaad ee saddexda naadi ee horyaalka ugu hooseya fadhiya, balse iyada ciyaari baaqi u tahay, taas oo haddii ay badiso ay booskeeda galli doonto Aston Villa.
Ciyaarihii kale ee Horyaalka Ingiriiska Sabtidii
Beckham Oo Farxad Ku Gudoonsiiyey Wiilkiisa Biladdii Ugu Horeysay Ee Kubada Cagta ah
Bebeto Oo 20 Sanno Kadib Sameeyey Dabaal Daggii Xusuusta Reebay Ee 1994-kii
Xidhiidhka K/cagta ee UEFA Oo xidhaya qayb ka mid ah Garoonka Realmadrid